abahambi Abaningi baye bakhetha ukunciphisa carbon wabo lokungcolisa ngokushayela indiza kancane noma ngokunciphisa indiza travel ngokuphelele, ogxile eziphendula buzzword Swedish Izindiza Shame (indiza amahloni). Akusiyo imfihlo ukuthi air travel manje omunye abanikeli ezanda kwesimo sezulu. Nakuba ezindizayo uyohlale umdlali obalulekile kanjani sikhetha ukuhamba, sidinga akhunjuzwe ukuthi nezinye izinhlobo ukuhamba sipho ukuthusa eco amaholide.
Izincwajana zemininingwane travel has a nostalgic esidlule umusa wokuzungeza nokuhlobisa elinamandla eco travel friendly isinyathelo. It unikeza uhla izinzuzo kuhlanganise legroom ngaphezulu, udla imoto yokudlela bejabulela nezindawo ezinhle, ukuhamba nezingane kulula futhi kude labo abafuna ukuhlala exhunyiwe, ayikho imodi yokundiza. Izincwajana zemininingwane travel lilinganisa ngokungananazi ukuthi travel wemfanelo.
Ukusekela wendawo akuyona kuphela eco travel friendly isinyathelo kodwa liphinde umnikelo womphakathi okukhulisa. Ukuthenga bangakini kusho ukuthi akekho owaba ukuthutha lezo. Futhi na ngaphezulu, amabhizinisi endawo nethuba vuma. Kuyinto ekunciphiseni carbon lokungcolisa kanye win umphakathi wendawo.
Enye indlela ukudlala ekukhuthazeleni travel esimeme iwukuba bheka ikhithi travel. An eco friendly travel ikhithi sizofaka cishe isixubho bamboo, imishayo yemoto, namabha ensipho esikhundleni sama-gels eshawa. Ama-shampoos amancane nama-conditioners kanye nama-tumbler wokuphinda asebenzise kabusha. Aluminium water bottles are vital as well as a metal straw.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Indlela Izikhangibavakashi Eco Friendly Ngo 2020?” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftravel-eco-friendly%2F ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)